Football Khabar » सेटिनसँग अनुभव थोरै, अपेक्षा धेरै : बार्सिलोनालाई बनाउलान् त रंगीन ?
सेटिनसँग अनुभव थोरै, अपेक्षा धेरै : बार्सिलोनालाई बनाउलान् त रंगीन ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना क्लबले आफ्ना प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेलाई बर्खास्त गरेपछि नयाँ प्रशिक्षकमा क्वेक सेटिनलाई नियुक्त गरेको छ । गत राति बार्सिलोनाले भाल्भर्डेलाई पदमुक्त गर्दै उनलाई धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको छ । भाल्भर्डेको बिदाइसँगै क्लबले सेटिनलाई कलबको नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।
बार्सिलोना साउदी अरेबयिामा भएको सुपर कपको सेमिफाइनलमा एथ्लेटिको मड्रिडसँग ३–२ ले हारेपछि भाल्भर्डेको जागिर धरापमा परेको थियो । त्यसको ३ दिनपछि बार्सिलोनाले उनको कोठा खाली गराएको हो ।
६१ वर्षका नयाँ प्रशिक्षक सेटिनसँग बार्सिलोनाले सन् २०२२ को जुन ३० सम्मका लागि सम्झौता गरेको छ । क्लबले अफिसियल रूपमा प्रेस नोट जारी गर्दै सेटिनसँग २०२२ सम्म सम्झौता भएको बताएको छ ।
सेटिनको अनुबन्धपछि धेरैले बार्सिलोना पुरानै शैलीको खेलमा फर्किने अपेक्षा गरेका छन् । ‘प्राविधिक प्रशिक्षक’का रूपमा चिनिएका सेटिन आक्रामक शैलीका खेल प्रशिक्षक मानिन्छन् । उनको शैलीले बार्सिलोनाको गुमेको खेल शैली र लय फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ ।
को हुन् सेटिन ?
स्पेनिस प्रशिक्षक सेटिनले सन् २००१ बाटै प्रशिक्षक करिअर सुरु गरेका हुन् । त्यसबेला उनले स्पेनकै क्लब रासिङ स्टान्डर्डमा पहिलोपटक प्रशिक्षण गरेका थिए । त्यसपछि उनी पोली इजिडो, लोग्रोनेस, लुगो हुँदै ला लिगाकै क्लब लास पाल्मसमा आइपुगेका थिए । पाल्मस सम्हालेपछि युरोपियन लिगमा उनी चिनिएका थिए ।
सन् २०१७ मा पाल्मस छाडेका उनी सोही वर्ष रियल बेटिसको प्रशिक्षक बनेका थिए । उनले बेटिसलाई कोपा डेल रे को सेमिफाइनलसम्म पुराएका थिए । बेटिसले रियल मड्रिडलाई अन्तिम आठमा हराएर सेमि पुगेको थियो । २०१९ मा बेटि छाडेपछि उनी खाली थिए ।
बेटिसमा पहिलो सिजन बिताउँदा उनले टिमलाई युरोपा लिगमा छनौट गराएका थिए भने दोस्रो वर्ष कोपा डेल रे को सेमिमा लगेका थिए । तर, ३ वर्षको सम्झौता भए पनि क्लबको बोर्डसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनीलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
सेटिनसँग अपेक्षा धेरै : चुनौती बढी
नयाँ प्रशिक्षक सेटिन खेल शैलीका हिसाबले बार्सिलोनासँग मिल्छ । तर, उनीसँग ठूला टिम सम्हालेको अनुभव छैन । उनको सबैभन्दा ठूलो अनुभव भनेको ला लिगाको लस पाल्मस र रियल बेटिसको प्रशिक्षण हो । उनको कोचिङ करिअरमा सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको बेटिसलाई पहिलो सिजन २०१५–१६ मा युरोपा लिगमा छनौट गराउनु र २०१६–१७ मा कोपा डेल रे कपको सेमिफाइनल पुराउनु हो । म्यानेजरको भूमिकामा उनका नाममा योभन्दा ठूलो सफलता छैन ।
तर, दबाबबीच बार्सिलोनामा सम्हाल्न आएका उनीबाट क्लब र समर्थकले भने ठूलै अपेक्षा गरेका छन् । उनको अनुबन्धपछि बार्सिलोनामा रातारात कायापलट हुने कतिपय समर्थकहरूको बुझाइ छ । भाल्भर्डेबाट वाक्क भएका समर्थकहरू उनी हट्दाको खुसीमा नयाँ प्रशिक्षकले जादु नै चलाउने बुझाइमा देखिन्छन् ।
तर, ठूला टिम र ठूला प्रतियोगितामा अनुभव नै नभएका सेटिन बार्सिलोनाका लागि ‘कालो गएर कालै आयो’ भनेझैं हुने खत्रा अधिकतम् छ । युरोपियन लिग र विश्व फुटबल नै दिनहुँ प्रतिस्पर्धात्क बन्दै गएका बेला बार्सिलोनाजस्तो टिम सम्हाल्ने प्रशिक्षकसँग पर्याप्त अनुभव, ठूला सफलता हुनु आवश्यक हुन्छ । वा, त्यस्ता प्रशिक्षकले विश्वकै उत्कृष्ट क्लबलाई सम्हाल्ने क्षमता राख्छन् ।
तर, सामान्य प्रशिक्षक सेटिनको काँधमा यतिबेला बार्सिलोना छ । बार्सिलोना जसले युरोपको ठूलो उपाधि च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको चार वर्ष भइसकेको छ । जारी सिजन बार्सिलोना सबै प्रतियोगितामा उपाधि होडमा रहे पनि प्रदर्शनको स्तर लयमा छैन ।
बार्सिलोना हाल ला लिगामा लिग लिडर छ । रियल मड्रिडसँग समान अंक भए पनि बार्सिलोना झिनो गोलअन्तरमा शीर्ष स्थानमा छ । यता, च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोना अन्तिम १६ मा । क्वार्टरफाइनल जान उसले अन्तिम १६ मा इटालियन क्लब नापोलीसँग भिडन्त गर्नेछ ।
नयाँ प्रशिक्षक सेटिनसँग मध्यसिजनबाट बार्सिलोना सम्हाल्दा घरेलु लिगसहित च्याम्पियन्स लिग जिताउनुपर्ने दबाब छ भने गुम्दै गरेको बार्सिलोनाको शान फर्काउनुपर्ने चुनौती छ । के क्याम्प नोउमा उनले चमत्कार गर्लान् ? यो हेर्न कम्तीमा यो सिजन सकिँदाम्म पर्खिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७६, मंगलवार ०९:२१